Plastic tubing oyiyi akwa Manufacturers & Suppliers - China Plastic tubing Fittings Factory
Ihe nke openable njikọ na openable mkpọchi na-akpan formulated polyamide. Ogo nchebe bụ IP50. Na-egbu onwe ya, na-enweghị halogen, phosphor na cadmium (iwu RoHS na-eju afọ). Ọnọdụ okpomọkụ bụ min-30 ℃, max100 ℃, obere oge120 ℃. Agba dị oji (RAL 9005). Ọ nwere ike dabara na WYT emeghe tubing. Ihe nke openable njikọ na-akpan chepụtara polyamide. Anyị nwere eriri metric na eri PG.
Plastic ikiaka njikọ
Ngwongwo nke ikpere ikikere plastic bụ polyamide. Anyị nwere isi awọ (RAL 7037), nwa (RAL 9005). Ọnọdụ okpomọkụ bụ min-40 ℃, max100 ℃, obere oge120 ℃. Ọkụ na-ere ọkụ bụ V2 (UL94). Ihe nchebe bụ IP66 / IP68. Onye na-ere ọkụ: Na-ehichapụ onwe ya, na-enweghị halogen, phosphor na cadmium, gafere RoHS. Ọ nwere ike dabara na tubing niile ma e wezụga WYK tubing. Anyị nwere metric thread na PG thread na G thread.
Ihe a bu nickel-plated brass. Ọnọdụ okpomọkụ bụ min-40 ℃, max100 ℃. N'iji akara akara kwesịrị ekwesị, ogo Nchedo nwere ike iru IP68. Anyị nwere metric thread na PG thread na G thread. Mfe arịgo nke 45 Celsius / 90 Celsius ịghasa njikọ ikiaka na ehulata ka nọ n'ọnọdụ mgbe echichi.
Metal njikọ na Snap Ring
Ọ bụ metal mgbachi tubing njikọ. Ahụ ihe bụ nickel-plated brass; a gbanwere akara ahụ roba. Ogo nchebe nwere ike iru IP68. Ọnọdụ okpomọkụ bụ min-40 ℃, max100 ℃, anyị nwere eriri metric. Ihe bara uru bụ mmetụta dị mma na nkwụsi ike ịma jijiji, tubing ahụ nwere nnukwu ọrụ mkpọchi.
Njikọ Conically akara na Nje Enyemaka
Ihe omuma bu polyamide. N'iji akara O-kwesịrị ekwesị dị n'ime nsochi, IP66 / IP68, jiri akara akara na eri. Anyị nwere isi awọ (RAL 7037), nwa (RAL 9005) agba. Ọnọdụ okpomọkụ ahụ bụ min-40 ℃, max100 ℃, obere oge 120 ℃. Ọkụ na-ere ọkụ bụ V2 (UL94). Nwepu onwe, nke halogen, phosphor na cadmium na-enweghị, gafere RoHS. Ọ nwere ike dabara na tubing niile belụsọ ụdị WYK tubing. Anyị nwere eriri metric na eri PG.
Njikọ na Mgbapụta Enyemaka Na Eriri Metal
Ngwongwo bụ polyamide nwere nickel-ejiri ọla ọla. Ogo nchebe bụ IP68, na-eji akara akara akara gburugburu eri. Anyị nwere isi awọ (RAL 7037), agba ojii (RAL 9005). Onye na-ere ọkụ bụ V2 (UL94). Ọnọdụ okpomọkụ dị min-40 ℃, max100 ℃, obere oge 120 ℃. Nwepu onwe, nke halogen, phosphor na cadmium na-enweghị, gafere RoHS. Njirimara bụ ezigbo nguzogide mmetụta, njikọ njikọ kpụ ọkụ n'ọnụ, na-agbatị eriri. Ọ nwere ike dabara na tubing niile belụsọ ụdị WYK tubing. Anyị nwere eriri metric na eri PG.